Super Mario Run: fampidinana 10M sy tombony 4M ao anatin'ny 24 ora | Vaovao IPhone
Rehefa dinihina tokoa, ny natrehin'ireo izay noforonina manodidina ny anaram-boninahitra Nintendo farany ho an'ny iOS, ireto angona manaraka ireto dia mety tsy hahagaga ny olona rehetra. Alakamisy lasa teo Super Mario Run tonga tao amin'ny App Store ary vetivety dia niseho ho ny rindranasa alaina be indrindra ary ilay iray izay nitondra tombony be indrindra. Androany, App Annie asio isa amin'ny fahombiazan'ny lalao Mario ofisialy voalohany ho an'ny iOS: Fampidinana 10 tapitrisa sy tombom-barotra 4 tapitrisa dolara amin'ny andro voalohany ny fiainana.
App Annie dia nilaza fa hahaliana ny mahita raha mahavita mihoatra ny endriny ny Super Mario Run Pokémon GO, ny lohateny Nintendo sy Niantic malaza izay mpiorina voalohany amin'ny horonan-tsary sasany izay nahitana olona an-jatony nihazakazaka naka Pokémon angano. Ho fanampin'izay, ny fampitahana dia hahaliana ihany koa amin'ny fijerena ny maodelin'ny asa ampiasain'ny lalao roa.
Hifaninana amin'i Pokémon GO ve ny Super Mario Run?
Pokémon GO dia alaina In-100 tapitrisa ahazoana tombony manodidina ny 10 tapitrisa dolara isan'andro mandritra ny telo herinandro aorian'ny famoahana azy, mametraka firaketana vaovao ao amin'ny App Store. App Annie tsy mieritreritra fa handresy an'i Pokémon GO ny Super Mario Run:
Pokémon GO dia mampiasa maodely freemium miaraka amina fividianana rindrambaiko azo atao mba hahazoana tombony. Ny tombony azo amin'ny iOS dia nitombo hatrany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy satria mpampiasa maro no mampiasa azy. Etsy ankilany, Super Mario Run dia manolotra fividianana rindrambaiko indray mandeha amin'ny € 9.99 hanalana ny lalao iray manontolo. Vokatr'izany, ny fandoavam-bola dia mialoha ny fotoana maharitra ary noho izany ny tombony dia azo inoana fa hifantoka amin'ny andro voalohan'ny lalao amin'ny lalao.
Toa manazava tsara izay eritreretintsika rehetra ity: aleon'ny mpampiasa milalao anaram-boninahitra mandoa izay izy ary manadino ny fividianana ao anaty app, fa ho an'ny mpamorona ny maodely orinasa freemium dia tsara kokoa izay mety hahatsapan'ny mpampiasa fa ilaina ny manao fividianana mombamomba azy amin'ny fotoana rehetra raha kely izany, saingy hihena kely ihany izahay raha toa ka euro maro ny fandoavana fampiharana. Inona no modely tianao kokoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Super Mario Run: fampidinana 10 tapitrisa ary tombony 4 tapitrisa ao anatin'ny 24 ora
Ho an'ny fahitalavitra paoma fantatrao ve ny fotoana hivoahany?
Heveriko fa tsy hivoaka izany, efa sarotra tamin'izy ireo ny namoaka azy io ho an'ny iOS noho ny fifaninanana amin'ireo konsolany.
Heveriko fa tsy hihoatra azy io, satria teo amin'ny tsenambola dia nilatsaka ny anjaran'i Nintendo sy Dena
Valiny amin'i PEDRO
Tsy nanangona vola intsony izy ireo, azo antoka. Raha nataon'izy ireo mora vidy kokoa izany, dia ho latsaka ny 4 tapitrisa.
BlackBerry dia manokatra laboratoara mahaleo tena any Canada
Apple dia hampiakatra ny sazy ataon'ny Vondrona Eropeana amin'ny raharaha Irlanda